Bangaladhesh oo Xukun Daldalaad ah Ku Fulisay Mufti Abdul Hannan – Radio Daljir
Bangaladhesh oo Xukun Daldalaad ah Ku Fulisay Mufti Abdul Hannan
Abriil 13, 2017 6:20 b 0
Dowlada Bangaladhesh ayaa xukun dal dalaad ah ku fulisay Mufti Abdul Hannan iyo labo nin oo kale kuwaa oo lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen qarax bambaano oo lagu weeraray Danjire Anwar Choudhury .
Qaraxan ayaa ka dhacay masjid ay Suufiyadu leeyihiin waxaana ku dhintay sadex qof, danjiraha ayaana xiligaasi qaraxa kasoo gaaray dhaawac jirka hoose, waxaana weerarkan lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay Mufti Abdul Hannan .
Dowlada Bangaladesh ayaana shalay oo arbaco ah xukun dal dalaad ah ku fulisay Mufti Abdul Hannan oo la dsheegay in uu ahaa hogaamiyaha Xarakatul Jihad Al Islami , waxa uuna hogaamiyahan taageero ku dhax lahaa dalka Bangaladhesh.
Mufti Abdul Hannan ayaa ka soo dagaalamay Afghanistan isaga oo ka soo horjeeday Midawgii Soviet ka hor inta uusan ku biirin jabhadda magaceeda loo soo gaabiyo HuJI, taas oo lagu eedeeyay in ay ka dambaysay dagaallo dhawr ah.
Madaxweyen Farmaajo,”Shaqo Abuur Ayaan U Samayn Doonaa Dhalinyarada Soomaaliyeed”.